Njengohlobo lwe-pigment yensimbi, i-aluminium isiliva yokunamathisela ingaveza imiphumela ekhethekile ehlukile kwezinye izingulube ezejwayelekile. Amanye amasu enqubo yokusebenzisa i-aluminium enamathiselwe isiliva yokunamathisela emanzini azochazwa kafushane.
1. Ukuze kuzuzwe imiphumela ekhethekile egculisayo, i-aluminium isiliva yokunamathisela kufanele ihlakazeke ngokuphelele ohlelweni lokumboza, futhi ukumbozwa kufanele kube sesimweni esifanayo ngaphandle kwezinhlayiya ezinhle. Ama-flakes e-aluminium kulula ukuwagoba nokuwaphula, futhi uma kunyakaza ngesivinini esikhulu noma Kokunye ukucubungula okuqhubekayo okuqhubekayo, ukwakheka kwawo kwejometri kubhujiswa kalula, okuholela ezinhlayiyeni ezimahhadla, umbala omnyama, ukumbozwa okuncishisiwe, kanye nokufuduka kwensimbi. Ngakho-ke, izindlela zokusabalalisa amandla aphezulu ka-shear akufanele zisetshenziswe.
Ukusikisela: Sebenzisa indlela yangaphambi kokuhlakazeka: qala ngokukhetha i-solvent efanelekile noma inhlanganisela yamakhemikhali awuketshezi amaningana, bese ufaka i-solvent kunamathisela i-aluminium-silver ngesilinganiso se-aluminium-silver paste ku-solvent ka-1: 1 noma 1: 2, uvuse kancane kuze kube iyunifomu ((Cishe imizuzu eyi-10-20). Faka okokusebenza kohlelo. Ngokuvamile, okunamathiselwe kwesiliva kwe-aluminium kufakwe ku-solvent imizuzu engama-30 kusengaphambili bese kunyakaza kancane.
2. Ukukhethwa kokuhlanjululwa kwe-aluminium isiliva yokunamathisela kuncike kakhulu ezintweni zokupenda ezinqunywe ifomula. Okunamathiselwe okungahambisi kahle kwe-aluminium yesiliva kungasetshenziswa kakhulu kuma-solvents we-polar non-polar, njenge-aliphatic noma i-hydrocarbon enamakha, i-lipids (njenge-butyl acetate)), amaketoni (njenge-methyl ethyl ketone, i-methyl isobutyl ketone), i-alcohol ( njenge-ethanol).
3. Amakhemikhali awuketshezi aqukethe i-chlorine (aqukethe i-halogenated…) awafanelekile kunoma yiziphi izingulube ze-aluminium zesiliva. Amakhemikhali awuketshezi akhiqizwe ukhilimu azokhipha i-HCL futhi asebenze ngamakhemikhali ngezingulube ze-aluminium ezinhle.
4. Izinto eziningi ezisetshenziswa ngopende ezifana nezinto ezinamafutha ezi-varnish base, ama-acrylic esters, i-alkyd, i-cyclic itch esters nezinto ezisuselwa emanzini zingasetshenziswa ezingxenyeni ze-aluminium zesiliva ezinamanzi ezingantanta. Ngokuvamile, noma iyiphi into eyisisekelo yokupenda noma i-solvent ifanele inqobo nje uma ihambisana nesithwali se-solvent se-aluminium isiliva futhi ngeke idale ukulimala kwamakhemikhali kunamathisela isiliva ye-aluminium. Ukunakwa okukhethekile: i-aluminium uhlobo lwensimbi esebenzayo, futhi inani le-asidi kapende kufanele lilawulwe ngaphansi kwe-7.
5. Lapho uhlelo lokumboza oluqukethe i-aluminium unamathisela isiliva kudinga ukwengeza insimbi eyomayo, ye-aluminium esinamathisela isiliva, kungasetshenziswa kuphela izomisi ezingeke zisabele ngama-acid anamafutha ebusweni be-aluminium flakes. Kunconywa ukuthi usebenzise idayimane, i-zirconium, ne-manganese driers.
i-primer enemibala> i-aluminium yesiliva yokufaka isilinganiso isilinganiso 1% -4%
I-primer yesiliva emsulwa ene-aluminium yesiliva yokunamathisela isilinganiso isilinganiso 4% -10%
Ingxenye ye-aluminium yesiliva yokunamathisela engezwe ngopende olulodwa lwe-metallic flash paint ngu-5% -13%
Ipeyinti yokulwa nokugqwala, ukuwafaka kanye nekhoyili yokumboza i-aluminium isiliva yokufaka isilinganiso 10% -13%
7. Lapho ingaphezulu lefilimu yokumboza ithambekele ngokufana, umphumela omuhle utholwa. Ukuma okungahambelani kahle kuzodala ukuguquguquka noma ukucabanga okungafani. Ukuma kwe-pigment ye-flake kuhlobene nokwakheka nezimo zokwakha. I-volatilization ye-solvent ibangela ukuncipha kwefilimu enamathela emanzi, ekugcineni i-pigment ye-aluminium icindezelwa endaweni yokuma evundlile. Ukuphakama kokuqukethwe kuphela kupende, kunamandla lo mphumela. Lokhu kuchaza isimo se-flake pigment orientation. Ngakho-ke, izakhiwo ezibonakalayo zokumbozwa okuphansi okuqinile zingcono kunalezo zokumbozwa okuqinile. Kuhle.
I-volatilization ye-solvent izodala i-vortex eqinile ngaphakathi kwefilimu emanzi, kepha uma i-solvent inyakazisa kancane kakhulu, izokwakha lokho okubizwa ngokuthi yi-Naard vortex, evimbela ukubukeka okuhambisanayo kwe-pigment ye-aluminium (ikhiqiza i-turbidity).
Izinhlaka zingasetshenziswa ukukhuthaza i-volatilization of solvents (njenge-butyl cellulose CAB), futhi ezinye izithasiselo ziyasetshenziswa. Bangakwazi ukulungisa i-flake pigments. Kunemibiko emibhalweni yokuthi ukuhlakazeka kwe-wax kungaba "nomphumela wokuhlukanisa isikhala", futhi ama-surfactants nawo anemisebenzi efanayo. Kepha Umsebenzi kufanele uvivinywe ngaphambi kokusetshenziswa.
Umhleli wesinamathisela esiliva samanzi esenziwe ngamanzi uthemba ukuthi abathengi kufanele banake: Ebangeni elithile, izakhiwo ezibonakalayo zokumbozwa okuqinile okuqinile zingcono kunokumbozwa okuqinile okuqinile.